पुनम दिदीलाई १३ प्रश्न | We Nepali
नेपालको समय: १४:३५ | UK Time: 08:50
२०७६ कार्तिक १८ गते ४:२२
पाठकबृन्द दशैं तिहार अनि छठ उमंगका साथ बित्यो होला । ‘बिलेटेड’ शुभकामनासहित यो लेख एनआरएन यूकेको चुनावी रस्साकस्सी, हाम्रो आशा र अध्यक्ष पुनम गुरुङ दिदीका चुनौतिका पहाडहरुमा केन्द्रित छ । पुनम दिदीलाई बधाई टक्रयाउंदै यो लेख अगाडि बढाउन चाहन्छु ।
पाठकहरु ! राजनैतिक नेतृत्व, नेताको चाकडी, दौडधुप, एउटा झुण्ड तयार गरि आफैं पैसा हालेर सदस्यताको पासो हान्ने प्रवृत्ति र परम्परागत ‘सिण्डीकेट’ लाई निरन्तरता दिंदै एनआरएन प्रजातान्त्रिक नामक विवादित चुनावबाट तैरिएको छ ।
बिगत म कोट्याउंदिन किनकि त्यहां दुःखाईमात्र छ, पीडामात्रै छ । त्यहां सट्टेबाजका केही अपवाद बाहेक ‘गुलाम’ हरु मात्र छन् । मलाई नामै लिंदा पनि झर्को लाग्छ । विगतको परिवेश लगुंरबुर्जा खेलाएको जस्तो गोटी कहिले तल फर्कन्छ, कहिले दाहिने, कहिले देब्रे । त्यो बेथितितिर म जान चाहन्न ।
योग फगामी दाईको आव्हानलाई उर्दी मानी अनलाइन सदस्यता लिन मैले १० पाउण्ड तिरेर सदस्यता लिने कोशिस गरें । झण्डै तीन घण्टा खर्चिएं । मेरो प्रविधिप्रति अनभिज्ञता वा अज्ञानता अथवा एनआरएनको झारा टार्ने प्रबृत्तिको अर्को ज्वलन्त उदाहरण मानौं । यो झन्झटिलो र झारा टार्ने प्रवृत्तिको शिकार म आफैं भएं । अनलाइनबाट पैसा तिरियो, सदस्य हुनका लागि चाहिने डकुमेन्ट सबै अपलोड गरियो । यति भएपछि ढुक्क भएं अब सदस्य बनियो । तर बिडम्बना भोटर लिष्टमा नाम खोजें कतै भटिन । पछि मेरो नाममा पैसा नआएकाले बैकल्पिकमा राखिएको रहेछ । जबकि मसंग पैसा तिरेको प्रमाण यथेष्ट छ । न त कसैले मलाई सम्पर्क गरयो न त मैले कुनै ‘कन्फरमेसन’ नै पाएं । निर्वाचन समितिलाई हेर्ने जिम्मा दिइएको रहेछ, निर्वाचन समितिलाई दुई पटक इमेल गरें, हारगुहार मागें केही लागेन ।
निर्वाचन समितिले पनि यो चुनावबाट पाठ सिकोस्, राम्रो गर्ने नियत हुंदा पनि कलंकको टिका कसैलाई लगाउन नपरोस् खैर म जस्ता पीडित धेरै हुनुहुंदो रहेछ । नैतिक जिम्मेवारी लिंदै हाम्रो पैसाको महत्व दिंदै कि पैसा फिर्ता गर्नुस् कि सदस्यता दिलाउने काम गर्नुस् । विविध कारणहरुले यो चुनावले मान्छेहरुमा झनै वितृष्णा जगाइदिएको छ । पैसा तिरेर सदस्यता लिएकाहरुले सदस्यताको औचित्य नभएको भन्दै नैराश्यता बढेको अवस्था छ भने जनमानसमा ‘नेगेटिभिटी मेन्टालिटी’ बढ्ढो छ । निष्पक्ष रहने कोशिस राख्नुस् ।
पुनम दिदी मलाई केही चित्तबुझ्दो कारण दिनुस् जसले मलाई फेरी सदस्य बन्न प्रेरित गरोस् । मेरो दैनिक जीवन र नेपालप्रतिको मायांलाई जोडिने माध्यम बनोस् भन्ने मेरो आशा हो । म घोत्लिएर सोच्छु तर केही पाउंदिन सिवाय पदेनहरुको नेपालबाट आउने नेताहरुको चाकडी, दूतावासका कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथि र नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने गुटको सेवा । पाउ मोलाई र नेताको छेउमा उभिएर फोटो सेसन गर्ने भिड र ‘लंका हाक्ने गफ’ जनमानसको यो भ्रमलाई चिरेर अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, पहिलाकाले भन्दा काम गरेर पृथक कसरी बन्नुहुन्छ, कसरी म जस्ता हजारौं युवालाई समेटेर सदस्य बन्न प्रेरित गर्नुहुन्छ ? म लगायत मेरा हजारौं पाठक उत्तर खोजिरहेका छन् ।
अनुमानित रुपमा बेलायतमा एक लाख नेपाली छन् । यसमा मात्र १० पाउण्ड सदस्यता शुल्क राखिंदिदा पनि १० लाख पाउण्ड उठ्छ । स्वैच्छिक दान गर्नेहरु पनि निस्केलान् । त्यो १० लाख तब मात्र उठ्छ जब त्यो एक लाख नेपालीलाई हजुरले सांस्कृतिक, राजनैतिक र सामाजिक चरित्रलाई मिलाएर लैजानु भयो भने त्यो सम्भव छ । तेल र पानी घोल्दै हुनुहुन्छ, घोलिन्जेल मिल्छ नघोल्दा तेल तैरन्छ बिचार गरिदिनुस् । पुनम दिदी दुई वर्ष कटाउन मुस्किल नहोला । काम गर्नेका निम्ति दुई वर्ष आंफैमा पूर्ण समय हो ।
लेखक अन्जन बगाले
बेलायतको जनमानस हजुरबाट तल उल्लेखित प्रश्नहरुको उत्तरको प्रतिक्षामा छन् । म पनि उत्तर आउंछ भन्ने आशा गरेको छु ।
२) नेपालमा लगानी भित्रयाउन हजुरको टिममा कस्ता कस्ता विशेषज्ञहरु छन्, बैकिङ क्षेत्रबाट, कर्पोरेट क्षेत्रबाट ।
३) नेपालको राजनैतिक झन्झटलाई सल्टाउन सक्ने कस्ता मान्छेहरुको संलग्नता छ ?
४) नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरु पहिचान कसरी गर्नु भएको छ ?
५) पर्यटन, हाइड्रो, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, अलैंची, अदुवा, चिया, कफी निर्यातका लागि कलकारखना कति खोल्ने कति लगानी लैजाने र नेपालमा कति नेपालीलाई रोजीरोटी निर्माण गर्ने योजना बुन्नु भएको छ ?
६) नेपाल सरकारको ‘ब्युरोक्रेसी’ संग समन्वय गरेर लगानी गर्न दूतावाससंग कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ?
७) नेपाली दूतावासले लगानी सम्मेलन कयौं पटक गरेको छ । त्यसलाई कसरी सदुपयोग गरियो अथवा कति लगानी भित्रियो कुनै डाटा भए आभारी हुने थिएं ।
८) जनताले पुरातन ‘माइण्ड सेट इग्नोर’ गर्दैछन् । नयां के पस्किन सक्नुहुन्छ ?
९) दोहोरो नागरिकता (डोयल सिटिजनसीप) सरकारले किस्तामा दिएको छ । यो कानुन पूर्ण लागू गर्न के कस्ता योजना छन् ?
१०) गोर्खाहरुको समस्या ज्वलन्त छन् कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
११) सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक पुरयाउने लक्ष्य राखेको छ । पर्यटन समितिसंग कसरी एनआरएनले काम गर्ने योजना बनाएको छ ? प्रष्ट पारिदिनुहोस् । (हुन त पर्यटनमन्त्रीसंग एउटा अन्तरक्रिया त गर्नुभयो ।)
१२) घर घरै सदस्यता बनाउंदै हिंड्ने प्रचलनको अन्त्य गर्दिनुहोस् कि चिठ्ठीलाई मात्रै मान्यता दिनुहोस् । भोट हाल्नेलाई पनि कसलाई भोट हाल्ने जानकारी होस् ताकि स्वयंम सेवक खटाएर उम्मेदवारहरुको नाम लिष्ट बनाएर बांढ्नु नपरोस्, क्वान्टिटी कि क्वालिटी हजुरको जिम्मा ।
१३) पैसा तिरेर पनि सदस्यता लिन नपाएकाहरुको कि पैसा फिर्ता गरिदिनुस् कि सदस्यता दिलाउनुहोस् ।
र, अन्त्यमा म लगायत मेरा पाठकहरु जान्न चाहन्छन् । जन्ताले आग्रह गरेका छन् गुट उपगुटमा नफंसिदिनुहोस्, समुदाय र जातको हिलो छयाप्नेहरुसंग बचेर नेपालीको भइदिनुस्, नेपालले जे जित्छ नेपालीले जित्छ । कुरा बढी गर्ने काम नगर्नेहरुको झुण्डहरुले हजुरलाई भ्रममा राख्दिन सक्छन्, बिचौलिया गरेर दैनिक चलेको हुन्छ उनीहरुबाट बच्नु पर्ने हजुर हो बचिदिनुस् कुरा भन्दा काममा विश्वास गर्दिनुहोस् । खादा मालाबाट बचिदिनुहोस् ति खादामाला नै तपाईंको गल्पासो नबनुन् शुभकामना ।